नेपाली पब्लिक शुक्रबार, वैशाख २३, २०७९
अनुहारमा काला दागहरू आएर हैरान हुनुहुन्छ ? वा अनावश्यक चिल्लोपना भएर तनावमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने यहाँ ५ तरिकाको प्रयोगबारे चर्चा गरिएको छ । जसको प्रयोग गरी सहजै त्यस्ता दागहरू हटाउन सकिनेछ । यी ५ विधि, जसको प्रयोगले सहजै हट्छ अनुहारको कालो दाग
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २३, २०७९ २०:५९
निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात गर्न दिने छलफल भइरहेको छ : मन्त्री बडु